* Size: H1200 * W700 * D600mm
* Lock ကို: လက်ဗွေ + ကိန်းဂဏန်း password ကို
* မီးသတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 120 မိနစ်
* မော်တော်: ဂျပန်မော်တာ
*4ဘက်အစိုင်အခဲတုံး၎င်း၏အချင်း 30mm ဖြစ်ပါတယ်။
* လက်ကိုင်:3ပြောသော
ပြင်ပ Size ကို (မီလီမီတာ)
1 ။ ဤသည်ကိုလုံခြုံ box ကို winder Weierxin ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားလက်ပတ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ ဒါဟာ 120min fireproof ပါပဲ။
3 ။ ဒါဟာ 12 နာရီ fit နိုင်ပါတယ်။
4 ။3လှည့်သည် Modes,5အလုပ်လုပ် Modes သာရှိပါတယ်။
3.Q. ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာငါတို့လိုဂို print ထုတ်နိုင်ပါသလား?
1.Our စက်ရုံအဲဒီ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လွန်ပြီ။